Sintered mesh filter chinhu chichava nesimba mumunda wehunyanzvi
Kuda kwemusika: mumusika unotevera, kudiwa kwechinhu chakapetwa mesh kuchenesa kuchawedzera. Nekukurumidza kukurumidza kwekugadzirwa kwemachira nemakemikari, sintered mesh filter element ichave nemusika wekuwedzera kukurumidza, uye huwandu hwemusika hunowedzera zvishoma nezvishoma, uye mabhizinesi makuru achabatana muindasitiri iyi.
Sintered mesh faira yechinhu chinhu chitsva, chinhu chayo chikuru is stainless sintered mesh. Iyo sintered mesh faira yechinhu ine yakanaka yekuchera maitiro uye yunifomu yepasi yekuficha kuita. Iyo nzira dzechi sintered mesh filter element ndeye crisscross, kwete chete inopesana nekushisa kwakanyanya, asi zvakare inopesana nekudzima uye kupisa. Inogona kushandiswa munzvimbo inokanganisa, uye yakakodzera mhando dzeasidi-base uye inogadzira midhiya. Iyo sintered mesh filter element ine yakakwirira simba uye kupfeka kurwisa, iyo inonyanya kukodzera kufefetera kwe sarufa-ine gasi. Iyo sintered mesh faira chinhu chine hutano hwakanaka uye inogona kuturikwa munzvimbo yepamusoro-yekumanikidza. Iko kusefa kwekuita kwe sinter screen filter chinhu chakagadzikana uye chinoita zvakare. Mushure mekudzokororwazve kuchenesa, iko kuita kwefaji kunogona kudzoserwa kune anodarika 90%. Iyo dhizaini yakagadzikana uye kwete nyore kuremadza. Uye zvakare, saizi yeaster screen yefaira rekugadzirisa rinogona zvakare kushandurwa maererano nezvinodiwa, riine dhizaini kuita, uye rinogona kushandiswa munzvimbo yakadzika-tembiricha uye yakadzika tembiricha tembiricha.
Maererano nekutsvaga kutsva kwemusika, simbi isina sintered mesh filter element ichave neshanduko huru mumakore mashanu anotevera uye tarisiro yakakura yekuvandudza. Izvi hazviratidzwe chete mukuita kwayo kwese sintered mesh filter element, asi zvakare mukukura kwakakura kusangana sintered mesh filter element, inochengetedza kukura kwakasimba mumusika unotevera. Mumusika wepamberi, iyo manejimendi system ye sintered mesh filter element iri rakanyanya kukwana. Iko kuita kwese kuchave mune zvinotevera zvikamu:
Hunyanzvi: mumusika mune ramangwana, sintered mesh filter element ichava nesimba mumunda wehunyanzvi. Uye isu tese tinoziva kuti zvisinei kuti ndeipi indasitiri yatiri mairi, pane nguva dzose zvigadzirwa zvinogadzirisa zvakanakira, uye iyo sintered mesh filter element ndeimwe yacho. Mumusika wepamberi, simbi isina sintered mesh filter element ichave mutungamiri weiyo indasitiri iine mikana yayo akasiyana.
Kuvandudzwa kwebhizinesi: mumusika unotevera, kana bhizinesi risineti sintered mesh filter element rinongoda kuvimba nemutengo, zvichave zvakaoma kumira pamusika. Nemakwikwi ari kuwedzera anotyisa, kwete chete kuti mutengo wakaderera, asiwo mhando yacho iripo uye mhedzisiro yacho yakanaka, inoita kuti huwandu hukuru hwemabhizimusi madiki abviswe nekuda kwehunyanzvi hwekudzokera shure, saka inoisawo mberi zvinodiwa zvikuru zvemabhizinesi.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-16-2020